သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြိုးအနှယျ Crystal ကြီးထွား: ညွှန်ကြားချက်များ
တစ်ဦးအမြိုးအနှယျ Crystal တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးကအမြိုးအနှယျကြည်လင်သင်တစ်ဦးကြီးမားသောကျောက်သလင်းကြီးထွားဖို့ပြည့်သို့မဟုတ် supersaturated ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာထည့်သွင်းမယ့်သေးငယ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောကြည်လင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ရေထဲမှာပျော်မဓာတုများအတွက်အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင်ကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။
တစ်ဦးအမြိုးအနှယျ Crystal တိုးတက်ကြီးပွားဖို့လိုအပျသောပစ္စည်းများ
သငျသညျ crystallize ချင်သောဓာတု (ဒီနေရာမှာအချို့ အကြံပြုချက်ပြုတ်နည်းများ )
ရေတိမ်ပိုင်းပန်းကန် (ဥပမာ Petri ပန်းကန် တစ်ခုသို့မဟုတ်ပန်းကန်ပြားပျံ)
အပူအရင်းအမြစ် (မီးဖို, မိုက်ခရိုဝေ့, ဒါမှမဟုတ်ပူပြင်းတဲ့ပန်းကန်)
တစ်ဦး Crystal ကြီးထွားလာဖြေရှင်းချက် Make
သင်တစ်ဦးပြည့်ဖြေရှင်းချက်စေလိုသည်မည်မျှဓာတု၏ခန့်မှန်းနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးကတော့, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်မှာသင့်ရဲ့ဓာတု၏နိုင်မှုကိုသိလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ဤအချက်အလက်သင်သည်သင်၏ဖြေရှင်းချက်အအေးလာသောအခါမျှော်လင့်သောအရာကိုထုတ်ရှာဖွေအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ဦးအနိမ့်အပူချိန်မှာထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်မှာပိုပြီးပျော်ဝင်လျှင်ဥပမာ, ထို့နောက်သင်ဖြေရှင်းချက် (ဥပမာအအေးအဖြစ် crystals အလွန်လျင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းရန်မြျှောလငျ့နိုငျ သကြား crystals ) ။ အဆိုပါနိုင်မှုသင့်ရဲ့အပူချိန်အကွာအဝေးကျော်အများကြီးကိုပြောင်းလဲမပါဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ crystals (ဥပမာကြီးထွားစေရန်ရေငွေ့ပျံအပေါ်ပိုပြီးမှီခိုအားထားရပါလိမ့်မယ် ဆား crystals ) ။ တကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျကြည်လင်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုလှုံ့ဆော်ရန်သင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုအအေး။ အခြားအမှု၌, သငျသညျရေငွေ့ပျံအရှိန်မြှင့်ဖို့နွေးအဖြေကိုစောင့်ရှောက်။ သင်သည်သင်၏နိုင်မှုသိလျှင်, ဒေတာအဖြေတစ်ခုလုပ်ကြောင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာဘာလုပ်ရမှန်းင်:
တစ်ဖန်ကွန်တိန်နာအတွင်းရေအကြောင်းကို 1/4 ခွက်ကို (50 ml) အပူ။ တစ်ဦးကသတ္တုကွန်တိန်နာသင့်ရဲ့ဓာတုနှင့်အတူတုံ့ပြန်မည် ပလတ်စတစ်ကွန်တိန်နာအရည်ပျော်ပေမည်။ ငါသည်တထည်တိုင်းခွက်ကိုအတွက်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာရေကိုပြုတ်။ (ဒါဟာကွန်တိန်နာလှည့်ကြောင်းခရိုဝေ့ဖ်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ဖို့မလေ့! သင်၏အရေ superheat ဖို့မသတိထားပါ, ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားပါ။ ) ကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းချက်ထဲကလဲကြကြောင်း crystals သည်ကိုသင်ရေကိုသာကော်ဖီအိုးအပူချိန်မှအပူသို့မဟုတ်ပင်လိုအပ်နိုင်ပါသည် ပူပြင်းတဲ့ထိပုတ်ပါရေ။ ဘယ်အချိန်မှာသံသယရှိရေကိုပြုတ်။
သင့်ရဲ့ဓာတုအတွက်မွှေပေးပါ။ ဒါကြောင့်ဖျက်သိမ်းရပ်များနှင့်အနည်းငယ်ကွန်တိန်နာအတွင်းစုဆောင်းတိုင်အောင်ဖြည့်စွက်ထားပါ။ ဒါဟာမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲပေးပါ။ နောက်တဖန်ဖြေရှင်းချက်နှိုးဆော်နှင့်လိုအပ်ပါကပိုပြီး Solutions (သင်ဖျက်သိမ်းရေးနေသောပစ္စည်းပစ္စယ) ထည့်ပါ။
တစ်ဦး Petri ပန်းကန်သို့မဟုတ်ပန်းကန်ပြားပျံသို့အချို့သောဖြေရှင်းချက်သွန်းလောင်း။ ကိုသာပန်းကန်မဟုတ်ဘဲ undissolved ပစ္စည်းမဆိုစရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေရှင်းချက်သွန်းလောင်း။ သင်တစ်ဦးကော်ဖီ filter ကိုမှတဆင့်ဖြေရှင်းချက် filter လိုပေမည်။
ဖြေရှင်းချက်အငွေ့ပျံအဖြစ် crystals ဖွဲ့စည်းရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝအငွေ့ပျံမတိုင်မီဆန္ဒရှိလျှင်သင်တစ်ဦးကြည်လင်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အဖြေကိုချွတ်လောင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ကြည်လင်ချွတ်ခြစ်။ ဖြေရှင်းချက်အငွေ့ပြန်မှီတိုင်အောင်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ယင်းကိုရွေးချယ်ပါ ကအကောင်းဆုံးကြည်လင် ခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ပန်းကန်ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Big crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်သင်၏အမျိုးအနွယ် Crystal အသုံးပြုခြင်း
ယခုတွင်သင်သည်အမျိုးအနွယ်ကိုကြည်လင်ရှိသည်သောကြောင့်ကြီးထွားဖို့ကသုံးစွဲဖို့အချိန်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ကျောက်သလင်း :
ရိုးရှင်းတဲ့ထုံးနှင့်အတူနိုင်လွန်ငါးဖမ်းလိုင်းပေါ်သို့ကြည်လင်ချည်နှောင်။ သငျသညျကိုသူတို့စိမ်ကြောင့်နိုင်လွန်ခြင်းနှင့်မဟုတ် '' ပုံမှန် '' ချည်မျှင်သို့မဟုတ် string ကိုလိုခငျြ, ဒါကြောင့်သင့်အဖြေများအတွက်မီးစာအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်, သူတို့ကကြမ်းတမ်းဖြစ်ကြပြီးကွာသင်၏အမျိုးအနွယ်ကြည်လင်ထံမှကြည်လင်တိုးတက်မှုနှုန်းဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား, သင်သည်သင်၏ crystals ကြီးထွားဖို့အသုံးပြုတဲ့ကွန်တိန်နာလုံးဝသန့်ရှင်းချောမွေ့သည်နှင့်မျဉ်းနိုင်လွန်ဖြစ်ပါသည်, သင်၏အမျိုးအနွယ်ကြည်လင်ကြည်လင်ကြီးထွားမှုအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိမျက်နှာပြင်ဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်.
သငျသညျကနိုင်လွန်လိုင်း၏ချွတ်ချော်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်ကြည်လင်အတွက်သေးငယ်တဲ့ groove ခြစ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ နိုင်လွန်နေတဲ့ထုံးကိုကြိုးနဲ့တုတ်မှသုံးစွဲဖို့အလွယ်ကူဆုံးပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ရပ်ဆိုင်းရန် အမြိုးအနှယျကြည်လင် ကလုံးဝဖုံးလွှမ်းနိုင်အောင်တစ်ဦးပြည့်သို့မဟုတ် supersaturated ကြည်လင်ဖြေရှင်းချက်၌တည်၏။ သင်ကကြည်လင်နှစ်ဖက်စလုံးဒါမှမဟုတ်ကွန်တိန်နာ၏အောက်ခြေကိုထိချင်ကြဘူး။ သင့်ရဲ့ကျောက်သလင်းဖြေရှင်းချက်အလုံအလောက်အာရုံစိုက်မထားလျှင်, သင်၏အမျိုးအနွယ်ကြည်လင်ပျော်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးကိုဖန်ဆင်း ပြည့်ဖြေရှင်းချက် ကိုသင် '' အစစ်အမှန် '' ကြည်လင်ကြီးထွားဖို့ ( ပို. ရေနှင့်ကြည်လင်ဓာတုနှင့်အတူ မှလွဲ. ) ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသုံးနိုင်သည်ဒါသင်၏အမျိုးအနွယ်ကြည်လင်သည်။
အဖြေတစ်ခု supersaturate စေရန်, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်း (အချို့ခြွင်းချက်နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ငါအခြားအချိန်အဘို့အကြောင်းကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်) ကအအေးတစ်ဦးမြင့်မားသောအပူချိန်မှာပြည့်ဖြေရှင်းချက်ပါစေ။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှသကြားပျော်မယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့် ရေဆူပွက်အတွက် ဖြေရှင်းချက်ကရရှိသွားတဲ့အချိန်မှာ supersaturated ပါလိမ့်မည် အခန်းအပူချိန် ။ တစ်ဦးက supersaturated ဖြေရှင်းချက် (မကြာခဏနာရီစုံတွဲတစ်တွဲ၏သင်တန်းကျော်) လျင်မြန်စွာ crystals ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကပြည့်နှက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးကြည်လင်ထုတ်လုပ်ရန်ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ကျောက်သလင်းအနေနဲ့ဘေးလွတ်သောနေရာတွင်ပေါက်ပါစေ။ သငျသညျအဖြေညစ်ညမ်းမူကနေဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်သမျှကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ်ဦးကကော်ဖီ filter ကိုသို့မဟုတ်စက္ကူပဝါနှင့်အတူအဖြေကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုပေမည်။
လိမ္မော်ရောင်ပိုတက်ဆီယမ် Dichromate crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်ဘယ်လို
တစ်ဦး Benzoic အက်ဆစ်နှင်းကမ္ဘာလုံး Make လုပ်နည်း
ဝိုင်သို့မဟုတ်သွေးထဲသို့ရေ Turn လုပ်နည်း
တစ်ဦးရီးရဲလ်ချော်ရည်မီးအိမ် Make လုပ်နည်း
တစ်ဦး Borax Crystal စတားတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ Soda ရေပန်းများ၏သမိုင်း
Goldilocks နှင့်သုံးဝက်ဝံ - Funny အရိုးကျိုးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်
တစ်ဦးစာအုပ်သို့မဟုတ်က Short Story ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာ Find လုပ်နည်း
အပျက်အစီးတိမ်: တစ်လေဆင်နှာမောင်း Touchdown ၏ Visual တွေကို
မုယောစပါးကို (Hordeum vulgar) - သူ့ရဲ့ပြည်တွင်း၏သမိုင်း
Mabon သမိုင်း: အဆိုပါဒုတိယအရိတ်သိမ်း
ယောသပ်သည်မိုက်ကယ် Swango ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
သင့်ရဲ့ IRS ကိုအခွန် Returns ၏မိတ္တူသို့မဟုတ်မှူး Get လုပ်နည်း
အဘယ်အရာကိုအတွင်းခံအဝတ်အစားအလယ်ခေတ် Times သတင်းစာအတွက်လိုပဲခဲ့
ကို Strong အက်ဆစ်များစာရင်း
စပိန် Adverb ဖို့နိဒါန်း
က Hidden Infrared ဠာ Exploring
ကမျြးစာ၏ 20 နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးများ
ပန်းချီတိမ် Wet-On-စိုစွတ် acrylic သို့မဟုတ်ရေနံပန်းချီအသုံးပြုခြင်း